Waad ku mahadsan tahay inaad booqato oo aad ka soo dukaameysato boggayaga.
Kuwa soo socda ayaa ah shuruudaha iyo shuruudaha ka dhigaya siyaasaddayada dhoofinta.
1. Amarka Tusaalaha
shaybaarada kaydka ah, wakhtiga dhalmadu waa ilaa 7 maalmood. Dalabka waxaa soo rari doona caalami ah muujiyaan adeegga marka laga reebo mishiinada. Waqtiga keenista wuxuu dhaqan galayaa ka dib markaan helno lacagtaada.
2. Ku saabsan Nidaamka Rarida Caadiga ah ee Rarista wakhtiga
Badeecadaha intooda badan waxaa lagu heli karaa kayd waxaana lagu keeni doonaa 7-15 maalmood oo shaqo gudahood ka dib dejinta lacag bixinta. Fadlan mar kale noo xaqiiji ciwaanka geynta ka hor inta aan la rarin.
Dalabka lama soo dejiyo lamana keeno maalmaha fasaxa ah ama fasaxa. Haddii aan la kulmeyno dalabaad aad u sarreeya, shixnadaha waxaa laga yaabaa inay dib u dhigaan dhowr maalmood. Fadlan u ogolow maalmo dheeraad ah oo ku sii gudbinta. Haddii uu dib u dhac weyni ku iman doono soo dejinta dalabkaaga, waxaanu kula soo xidhiidhi doonaa iimaylo ama telefoon.
3. Amarada OEM&ODM
Dhammaan alaabtayada waxay aqbali karaan adeegga OEM&ODM. Alaabooyinka gaarka ah ee la habeeyey ama dalabaadka gaarka ah, waanu kula soo xidhiidhi doonaa oo ugu dambeyntii raaci doonaa taariikhda keenista lagu heshiiyey ee PI. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican inaan daboolno baahiyahaaga.
4. Heerarka rarka & qiyaasaha gaarsiinta
Kharashka dhoofinta waa la go'aamin doonaa oo laguu soo sheegi doonaa wakhtiga hubinta. Kharashka iyo wakhtiga keenista way kala duwanaan doonaan iyadoo la raacayo dalabaadkaaga hababka dhoofinta ee kala duwan.
5. Xaqiijinta rarka & Amarka raadinta
Marka aanu kuu soo dirno dalabaadkaaga, waxaanu kuu soo diri doonaa iimaylka xaqiijinta kaas oo ku lifaaqi doona dhammaan faahfaahinta dalabka, aqoonsiga raadraaca, iyo xidhiidhka; Caawinta, waxaad la socon kartaa dalabkaaga. Sidoo kale, waad nala soo xiriiri kartaa si aan ula socono dalabaadkaaga.